Ogaden News Agency (ONA) – Mudaharaad Xoogan oo Kadhacay Gobolka Sh/K/ Itoobiya.
Mudaharaad Xoogan oo Kadhacay Gobolka Sh/K/ Itoobiya.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Shucuubta Koonfureed ee Itoobiya ayaa sheegaya mudaharaad balaadhan oo maalin nimadii shalay oo Talaado ahayd gilgilay qaybo badan oo Gobolka Ah.
Mudaharaadkan oo lagu diidan yahay maamulka Gobolka ayaa kadhacay magaalada Shaka Zone, waxayna dadwaynuhu kuddhawaaqayeen erayo kadhan ah kooxdii TPLF ee galbatay iyo maamuladii ay samaysay, waxayna dadku dareenkooda umuujinayeen maamulka cusub.
Dadka dagan Koonfurta Itoobiya ayaa quud daraynaya in laga badalo maamulkii ay Tigreegu samaysteen oo wali kadhisan Gobolka isla markaana sida ay shacabku qabaan fuliya awaamiirtii maamulkii tagay ee TPLF.
Dadka shacabka ah ee kudhaqan Shaka Zone ayaa sidoo kale aad uga soo horjeeday dagaalada soonoqnoqday ee kadhaca guud ahaan Gobolka Shucuubta Koonfureed gaar ahaan magaalada Shaka Zone, halkaas oo ay kudhinteen tobonaan kun oo shacab ah.
Magaalada Shaka Zone ayaa lasheegayaa in ay kudagaalameen 4 qoomiyadood oo waawayn kuwaas oo isku haysta gacan kuhaynta magaalada, waxaana lasheegayaa in ay barakaceen dad kor udhaafaya 1.8 milyan oo shacab ah.
Dagaalada soonoqnoqday ee Gobolka Shucuubta Koonfurta Itoobiya kadhaca ayaa lasheegayaa in ay galaafteen nolosha dad badan oo shacab ah, isla markaana ay ku baaba’day hanti malaayiin ah oo nool iyo mood isugu jirta.
Dadka shacabka ah ee Gobolka dagan ayaa maamulka cusub ee Abiye Axmed uu hogaaminayo ka codsaday in laga hor dhaqaajiyo maamulka ay Tigreegu samaysteen ee Gobolka kashaqeeya kaas oo ay eeda dusha usaareen.